Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee 27 Tattoos Fikradaha nijaarada dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
27 Midka ugu Fiican ee Loogu Talagalay Dhaqdhaqaaqa Dumarka
Dumarka waxay jecel yihiin nooca tattoo ah. Waa tattoo shaashad ah oo u dhexeeya isbedel dhan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah shaati-yada kuwaas oo aad isticmaali kartid si aad u sameyso isbedel muuqaal ah. Markaad diyaar u tahay tattoo shimbir ah oo qurux badan, waa inaad hubisaa inaad haysatid tattooist wanaagsan oo kaa dhigi lahaa si sax ah.
1. Tartanka Badbaadinta ee Dumarka
2. Sawirada gacmeedka midabka
Tani super #half #sleeve tattoo ee haweenka ayaa noqonaya mid caan ah. Habka tattoo uu u socdo ayaa ah waxa ka dhigaya mid gaar ah oo dumar badan.
3. Sawirada gacmeedyada qurxinta badkeed
Waxaa jira meelo gaar ah oo aad ku heli karto #tattoo indhaha oo dhanna way kuugu jiri doonaan. Tattoo shaashadda ee gabdhaha waa shey taas oo ah sababta ay tahay inaad u hubiso inaad haysatid.
4. Tilmaamo gaar ah oo khaas ah
Tilmaamaha nooca shaashadda ah ee aad u baahan tahay waa wax aad awood u leedahay inaad sameyso. Markaad sidan sameyso, waxaa kuu fududaanaya in aad haysatid tattoo qaas ah oo qaas ah oo dadka ka dhigaya inay kuu eegaan marka aad hesho.
5. Quruxda qurxinta ee quruxda badhka ah
Weyn ayaa ah xajmiga naqshadaynta naqshadaynta shaashadda ee nuska ah, inta badan waa lacagaha. Waxaad u baahan tahay inaad tan fahanto kahor intaanad naftaada ku lug laheyn nooca tattoo ah. Haween badan ayaa jecel tattoo this.
6. Qurux badhid sharooto ah
Markaad rabto in aad kireysato tattooist si aad u sameyso naqshad yar oo shaashadda ah oo qurux badan, iskuday oo samee xayeysiiskaaga # marka hore ama joog intaad ku jirtid tattooist ka hor intaadan la soo bixi karin nashqad qurxoon oo adiga kugu habboon.
7. Sawirada gacmeedyada quruxda badhkood
Iyadoo la helayo naqshad laguugu talagalay tattookaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso qaabka naqshadeynta kuu fiican. Sawirada gacmeed ee raaxada ah ee aad u qurux badnayd waxay noqdeen kuwo cajiib ah marka ay ku jiraan jirka.
8. Caato sharootooyinka quruxsan
Waxaad tixgelin kartaa inaad bedesho meesha aad ku tashaneysid shaashaddaada nuska ah haddii aadan hubin sida qaabka sawirka tattoo uu kuu eegi karo. Marka hore, fiiri naqshadahan oo hubi in adiga kuu fiican tahay.
9. Ereyga Qodobbada Dharka Tattoo
Helitaanka tattoo waa wax aad u badan oo haween ah ayaa laga yaabaa inay rabaan. Haddii aadan arkin tattoo shaashadda nuska ah sida tan, waxaa laga yaabaa, waa waqtigii lagu tijaabin lahaa naqshadeynta kuuska.
10. Jacaylka Dharka Tattoo Half
Haddii ay dhacdo in aadan waligaa ku dhicin tattoo sida gabadha, waa wakhti aad adigu ku hesho tattoo shaashad ah oo kaa caawinaysa inaad isbedel ku sameysid adigoo matalaya macaamiishada adigu.
11. Iskudhinta Nabadgelyada ee Tattoo
Haddii ay dhacdo in aad ka fekereyso helitaanka taatuureedka shimbiraha ah ee nuska ah, waa inaad eegtaa naqshadeynta farshaxanimo badan oo online ah oo aad doorato.
12. Tattoo yar yar oo shaati ah
Markaad ka fekereyso helitaanka boomaato shimbir yar oo kabo ah, waxaad haysataa fursado badan oo aad ka soo qaadan kartid. Qaadashada tattoo-gaaga ayaa ah waxa kaa caawin kara inaad hesho naqshad dhamaystiran oo aad had iyo jeer jeceshahay.
13. Dharka Tartu Dhexdhexaad Ah
Haddii ay dhacdo in aad rabto sawir gacmeed ah, helitaanka sawir gacmeed oo ah sawir gacmeed ayaa noqon kara waxa kuugu siin lahaa naqshadaynta #idea ee aad u baahan tahay.
14. Qabooji Qodobbada Tattoo Tartu
15. Selfie leh Tattoo Tattoo Half
Haddii aad tahay gabar fiican, waxaad heshay naqshad qurxoon oo aad ku qanacsan tahay. Tattoo-ka quruxda badhka ah ee gabadhu waa wax kaa caawin kara inaad samayso bandhigga ugu wanaagsan ee aad u baahan tahay.
16. Tattoo badhkiis badhkiis
Xaqiiqdii, xitaa shakhsiyaadka aan jecel ee tattoo sidoo kale waxay jecel yihiin tattoo shaashadda yar oo awood leh. Tani waa sababta aan u aragnay noocyo badan oo shaati ah oo adduunka ah oo ku saabsan tattoo shaashadda.
17. Rose iyo Owl Half Sleeve Idea Tattoo
18. Dharka Tattoo Special ah
Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad tixgeliso, haddii aad heleysid tattoo-gaaga ugu horeeya ee gabadhu tahay in la helo tattoo shaag gaar ah oo lagu caawiyo tattooist wanaagsan.
19. Tartoo Dhexdhexaad Ah Dhexdhexaad
Shakhsiyaadka qaarkood, qotomoolitirku waa ay jecel yihiin iyo marka ay helaan jilbaha shaashadda ah ee loo yaqaan 'tung beta' oo ah jirkooda.
20. Cool Owl Naqshad Dhexdhexaad ah Tattoo
21. Daqiiqada dhirbaaxa ee dhaadheer
Fiiri tattoo this iyo fiiri sida quruxsan u eg. Marka aad dhab ahaantii tahay qofkii ku faraxsan nolosha, ka dibna tattoo ubax waa adiga.
22. Naqshadaynta ubaxa Dharka Tattoo ah
23. Farshaxan farabadan oo qurux badan oo lagu ciyaaro Tattoo
Qaar ka mid ah dadku waxay leeyihiin sawirro xusuus ah marka ay lumiyaan qof muhiima gaar ah noloshooda. Shakhsiyaadka kale waxay dhiiri gelin karaan sawirada si ay u xasuusiyaan waqti gaar ah noloshooda.
24. Flowers Half Dharka Lahaansho Tattoo Design
Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad daboolatid tattoo shaashaddaada badhka ah haddii ay qurxiso ubax. Dumar badan ayaa jecel tattoo kan taas oo ah sababta aad u rabto inaad jidhkaaga ku haysid.
25. Fikradda Half Boodhka Fikradda Tattoo
26. Wareegga Wareegga Wareegga Wareegtada Tattoo
27. Cool Tartoo Tartoo loogu talagalay gabadha
Tags:tattoos sleeve sawirada gabdhaha
tattoos qosol lehtattoos qabaa'ilkasawirrada raggatattoos moontattoo dheemanfikradaha tattootattoostattoos qorraxdatattoo ah octopusTartoo ubax badanku dhaji tattoostattoos qoortahenna tattoogadaal u laaboarrow Tattoonaqshadeynta mehndiTattoos Wadnahatattoos iskutallaabtaTattoo infinityjimicsiga bisadahamuusikada muusikadatattoos sleevewaxaa la dhajiyay tattoosshaatiinka shiidantattoos cagtatattoos taajkiiwaxay jecel yihiin tattoostattoos gacantasawirada gabdhahasawir gacmeedsawirada malaa'igtalammaanahatattoo indhahashimbir shimbirtattoos saaxiib saxa ahcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahJoomatari Tattooslibto libaaxTilmaamta jaalaha ahtattoos ubaxDhaqdhaqaaqagaraacista gacmahatattoo maroodigatattoos eaglelaabto laabtakoi kalluunkatattoo tilmaantaraagada kubbaddaTattoo Feathertattoo biyo ah